Maxaabiis Laga Qabtay Kooxda Khaatumo Oo La Geeyay Xabsiga Burco Iyo Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland Oo Ka Hadlay Dhirbaaxo Ay Ku Dhifteen Kooxda Soo Weerartay – Araweelo News Network (Archive)
Burco(ANN) Maxaabiis tirsan Maleeshiyadda Nabad diidka ah ee sheegta Khaatumo oo ay ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore deegaanka Xudun ee gobolka Sool shalay ku qabteen. kadib dagaal gaadmo ah oo ay kusoo qaadeen
malayshiyadu ciidanka qaranka ayaa caawa Fiidkii la keenay Xabsiga Dhexe ee magaalada Burco.
Maxaabiistaa oo triradooda lagu sheegay Lix Maxbuus, kuwaas oo lagu qabtay dagaalkaa shalay dhexmaray Ciidanka qaranka Somaliland ee jiida Xudun iyo Malayshiyada Khaatumo.
Dhinaca Kale Ciidanka Qaranka Somaliland ayaa ka furtay maleeshiyadaa Laba Baabuur oo Tikniko ah iyo hal Baabuur oo xamuul ah, sidaana waxa daboolka ka qaaday Taliyaha Ciidanka qaranka Somaliland Gen. Ismaaciil Maxamed Cismaan (Shaqalle) oo war-bixin qoraal ah ka soo saaray xalay.
Taliyuhu waxa uu sheegay in ciidanka qaranka ee Jiida Xudun ee gobolka Sool ay kooxdii dagaalka soo qaaday gacanta kaga dhigeen Lix maxbuus.
Gen. Ismaaciil Shaqalle waxa uu sheegay in dagaalkaa ciidanka qaranka ay kaga dhaawacmeen laba askari, wuxuuna isagoo arrintaa ka hadlaya yidhi, “Maanta saacaddu markii ay ahayd 1:45 maalinimo, waxa maleeshiyaadka nabad diidka ah ee isku magacaaba Khaatumo ay weerar gar-darro ah ku soo qaadeen Ciidanka qaranka ee Jiidda Xudun, waxaanay dagaalkaasi kala kulmeen jab iyo halaag. Waxaana la eryaday masaafo dhan 40 KM,”ayuu Taliyaha Ciidanka qaranku yidhi warbixintiisa.
Sidoo kale Gen. Shaqale oo ka hadlaya dhirbaaxada ay ku dhifteen kooxdaa wuxuu yidhi, “Ciidanka qaranku waxay ka qabsadeen maleeshiyaddaas nabad-diidka ah laba Baabuur oo nooca Tiknikadda ah, hal baabuur oo Xamuul ah. Waxaana laga qabtay Lix maxbuus. Maxbuus.” ayuu yidhi Gen. Shaqale